FBC - ‘Google’ carraaqii Ameerikaan qaamolee ‘ad’ siyaasaa bitan saaxiluuf taasiftu deggere
‘Google’ carraaqii Ameerikaan qaamolee ‘ad’ siyaasaa bitan saaxiluuf taasiftu deggere
Finfinnee, Sadaasa 1, 2010 (FBC) ‘Google’ qindeessitoota Filannoo Ameerikaaf xalayaa Rooyitarsiin ifoomsame irratti beeksisoota siyaasaa maarsariitii hawaasummaan gadhiifaman (online) irratti seerri cimuu isaa akka deggaru ibseera; akka carraaqii dhiibbaa alaa filannoo irrattii hir’isuutti.
Seera baaftonni Google, Feesbuukii fi Tiwiitaraa ‘ejantoota’ Raashiyaa ‘ads’ tajaajila isaanii irraa bitan adda baasuu fi ittisuuf gahaa hojjachuu dhabuu isaaniif qeeqaniiru. Qondaaltonni Ameerikaa akka jedhanitti qabiyyeewwan ‘ads’ kunniin filattoota pireezdaantummaa Ameerikaa 2016 irraatti dhiibbaa kan uuman turani.
Seerri Ameerikaa qaamoleen alaa waa’ee dhimmota muraasaa akka beeksisan ni-eyyama, haata’u malee, filannoo keessa harka akka galfatan hin-eyyamu.
Fulbaana darbe, ‘koomishiniin’ Filannoo Federaalaa Ameerikaa seera faayinaansii duula na-filadhaa irratti baasee seeronni kunniin hojii ‘online’ irrattis akka hojjatu sagalee kenneen murteesseera. Yeroo itti uummanni kanaarratti yaada kennus kennee Wiixata goolabameera.
Xalayaa kanaarratti ‘Google’ deebii ‘Koomishinii’ Filannoo Federaalaa biyyattiif kenneen amma yeroo kamirrayyuu caalaa waliin taanee iftoomina fooyyeessuuf, dhiibbaa alaa fi jeequmsa filannoo Ameerikaa ittisuuf hojjachuu qabna jedheera.
Oduuwwan Biroo « Iskiriinin Aayfoon X yeroo qorraa hin hojjenne gabaarra oolera	Chaayinaan buufata poolisii roobootidhaan hojjetu ijaarufi »